wararka maanta-arlaadii.net » 2018 » January » 16
Wararka ka imaanaya Deeganka Goofgaduud oo 30 kiilo mitir u jirta Magalada baydhabo ee Gobolka baay ayaa sheegayain Ciidama ka tirsan Alshabaab ay saajay weeraro culus kusooqaadeen Fariisamo Ciidam katirsan Maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deeganka Goof gaduud. Goob...
Iyadoo uu maanta Magaalada Dhuusanareen ee caasimada Gobolja Galgaduud ee Bartamaha soonaliya lagu wado in uu booqdo mafaxweynaha dawlada Frderaalka soomaliya ayaa la sheegaya in La dhamestiri doono Heshiiskii u dhaxayeyay Dawlad Goboledyada Galmudug Iyo Kan Gobolada dhexe ee...
Xarakada Alashabaab ayaa xalay markii ugu horoosay War kasoo saaray Arinka Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abuu mansuur oo dhawan Kusoo biiray dawlada Federaalka Soomaliya Kaaso Hore ugu tirsanaa xarakada Alshabaab. Afahayeenka Xarakada alshabaab Cali maxamud Raage Cali dheere Oo soo...
Dagaalo aad u qareera ayaa xakay Ka dhacay degmada Afgooye ee Gobolka shabeelada Hoose . Dagaalkani oo bilawday abaari Maqribadii ayaa Waxaa soo qaaday Ciidamada Alshabaab kuwaaso Kaga soo qaaday dhanka Koonfur Ee degmada Afgooye . Lama ogo qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay...
Madaxweyn dawlada Federalka soomaliya mudane Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa xalay Ku hooyday Magaalada cadaado Ee caasimada Kuneel gaarka U ah Dawlada Goboleedka Galmudug taaso Oo shalay Si weyn Loogu soo dhaweeyay kadib narkii Booqasho Oo ku yimid . Madaxweyne Farmaajo ayaa...